MAXAAD KA TAQAAN BADDA
Waxaa kajawaabaya: Maxamed Shiikh Ismaaciil (Hirre)
C/O Galdogob, Somaliya.
Waxaa waraystay Maxamed Axmed, Wuxuuna waraysigu dhacay Ramadaankii hadda ina dhaafay, kana dhacay Gaalkacyo, Soomaaliya. Waana waraysi ku saabsan Badda.
S: Maxamed Assalaamu calaykum?.
J: Wacalaykum assalaam w.w.
S: Waxaan rabaa inaan wax kaa weeydiiyo axwaasha badda iyo khayraadkeeda, marka intaynaan taas ugelin sidaada goormaad biloowday kusafarka iyo kashaqaysiga badda ?.
J: Walaal waxaan bilaabay abbaartii sannadku markuu ahaa 1994-tii, ilaa haddana hawlaheeda waan kuguda jiraa.
S: Maxamed Sideeda xayawaanka badda kunool iyo kuwa berriga kunool kuwee baa badan baad aamminsantahay?.
J: Waxaan aaminsanahy inay badan yihiin wax badan xayawaanka Alle ku abuuray badda, kuwaasoo isla markaasna si ba'an utarma ama isu dhala, sidoo kale badda iyo berriga waxaa weeyn badda.
S: Maadaama aad badda waxbadan kujirtay, sidoo kale aad aragtay dadka kunool daafaha badda oo xeebta dega, xagga caafimaadka, yaa caafimaad badan dadka cuna badda waxa kujira iyo dadka kunool berriga?.
J: Markii aan u kuurgalay lana shaqeeyey dadka badda ka cuna irsaaqaddooda, waxaa ii soo baxday inay yihiin dad ka caafimaad badan dadka berriga kana sheegasho yar xagga xanuunada, sidoo kale haddii aad ufiirsatid cudurrada kubadan berriga sida wadna xanuunka, dhiig karka iyo sonkortuba aad ayay ugu yaryihiin dadka badda xeebaheeda deggan, saad ogtahayba xayawaanka badda kujira waxaa kubadan maaddooyinka laga helo feetamiinada iyo borotiinka, kuwaasoo saacida jirka habsami ushaqayntiisa.
S: Wax manooga sheegi kartaa xiliyada bada manaafacaadkeeda ladalbo?
J: Haah waxaan orankarnaa dhamaan xiliyada kaladuwan waa ladalbikaraa laakiin xiliyadu wayku kala haboonyihiin kaluumaysiga , 12ka bilood 3 ama 4 bilood ee xagaaga maahee intakale waxaa caadi ah helitaanka noocyada kaladuwan ee kaluunka, inkastoo uu jiro xili asbuuceed aykacdo badu xiliga xagaaga laftiisa waxaa jira noocyo kamida xayawaankeeda oo ladalbo, sida libaaxbadeedka oo helitaankiisu xiligaas kawanaagsanyahay xiliyadakale,
S: Maxaakeenay in cilmiga bada iyo faa’iidadeeduba ay kuyartahay soomaalida?.
J: Waxay ilatahay in su'aashaan jawaabteedu ubaahantahay daraasad iyo cilmi baaris dheer iyo in daawo loohelo, hayeeshee waxaan oran karaa waxaa sabab u ah iyadoo aan nahay dad asalkoodu ahaa reer guuraa, iyo shicibka oo aan helin dawlad ka caawisa kuna dhiiri galisa fahamka khayraadka iyo manaafacaadka badda, sidoo kale badaha soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inay tahay badaha Africa kuwa ugu khayraadka badan, isla markaana waxaa Soomaaliya kuyaal badda labaad ee ugu dheer Africa.
S: Waxaan in muddo ah maqalnaa QUBO & DII-DIIN, maxay kalayihiin maxaase udhaxeeya labadaan xayawaan?.
J: farqiga udhexeeya waxaan oran karnaa midi wuxuu kunool yahay badda midna berriga, inkastoo qubadu ay barriga kunoolaan karto muddo gaaban, midda kale qubada oo ah tan kunool badda waxtarkeeda markaan ka hadalno, subaggeeda iyo hilibkeeduba waxay daawo uyihiin cudurro badan oo lasoo darsa bini'aadamka sida Neefta, dhabar xanuunka iyo lafo xanuunkaba.
S: Inta aad badda iyo axwaasheeda baaraysey, majiraan xayawaan aad isleedahay waxay kuyaraadeen ama kanabaad guurayaan xeebaha Soomaaliya ama aan sidii hore ugu badnayn?.
J: Runtii way jiraan, waxaana kamida aargoosatada oo ay qaldantahay qaabka loo ugaarsado, dadku waxay qabtaan hooyada dhalaysa iyo midda dhallaanka ah, waxaa kaloo dhib kuhaya dhamaanba xayawaanka bada soomaaliya maraakiibta sida sharcidarada ah uga ugaarsada oo aan waxba u aabayeelayn.
S: Baddu maaddaama ay iyaduba tahay biyo, maka maarantaa roobka cirka?.
J: Maya kama maaranto ee aad bay ugu baahantahay, sida bariga iyo xayawaanka kunooliba ay ugu baahanyihiin roobka ayey bada iyo xayawaanka ku nooliba ugu baahanyihiin roobka la’aantiisana manoolaankaraan, markii roob ku da'aba xayawaanka Baddu wuu tarmaa.
S: Sidee u aragtaa khasaaraha ay kuhayaan bada Soomaaliya Maraakiibta sida tuugaysiga ah uga kalluumaysata?.
J: Waa arrin laga naxo runtii, khasaare aad ubadan bayna kuhayaan baddeenna, iyagoo ku kalluumaysta shabaago mamnuuc ka ah bada adduun oo aad ubaaxad weeyn ilaa meel fogna la gogli karo, sidoo kale waxay dhibaato iyo riixid ku hayaan kalluumaysatada soomaaliyeed ee farkutiriska ah, oo rabey inay noolaadaan, kuwaasoo aan lahayn awood ay isaga difaacaan iyo dawlad kadhicisa midna, iyagoo qabqablayaasha waddanka kuhabsadayna qaarkood xiriiro hoose la leeyihiin awageed.
S: Maxamed Su'aasha ugu dambaysa oo aan kuweeydiinayaa waxay tahay, nolol ma kasuuroowda badda dusheeda iyo in ladago?.
J: Jawaabtu waa haa, sida barriga oo kale, maaddaama wixii la cuni lahaa ay kudiyaar yihiin, sida aad ogtahayna dadyow fara badan ayaa kunoo badda dusheeda oo intaasoo fac isku dhalay doon gudaheed, isla markaas iyagoo kalasoo baxaya waxay cuni lahaayeen maalin kasta badda, dadkaas waxaa kamid ah, Shiinaha, Vietnam-ka iyo quruumo kale oo ubadan kuwa kudhaqan Bariga fog.